အပြစ်အနာအဆာကင်းသောအသားအရေအတွက် လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ရန် အရောင် (၅) မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မျက်လုံးအောက်ရှိ မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို ဖုံးကွယ်ပေးသည်။
အသားအရေနီမြန်းခြင်းနှင့် အသားအရောင်မညီညာခြင်းတို့ကို လည်း ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သည်။
အရမ်းကိုပြီးပြည့်စုံလှပတဲ့အပြင်အဆင်တစ်ခုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ palette တစ်ခုပါ။ အရောင် ၅ ရောင် ပါဝင်ပါတယ်။ အသားရောင် concealer ကအသားအရောင်မညီညာခြင်းကို ထိန်းညှိပေးပြီး ပန်းရောင် concealer ကမျက်ဝန်းအောက်ရှိမျက်ကွင်းညိုခြင်းကိုဖုံးအုပ်ပေးပါတယ်။ အစိမ်းရောင်က အသားအရေနီမြန်းခြင်းကိုဖုံးအုပ်ပေးပါတယ်။ cream type concealer ဖြစ်လို့ သုံးစွဲရလွယ်ကူစေပါတယ်။
317 Vote Votes
Concealer-palette. Beige - covers imperfections. Pink - conceals dark circles. Green - neutralises redness.